तपाइलार्इं पिनास हुन्छ ? ख्याल गर्नुुस् दिमाग नै पाक्न पनि सक्छ !
काठमाडौं, । विगत एक साता यता मौसम निकै चिसिएको छ । चिसो मौसममा रुघा खोकीले त सताउँछ नै, धेरैजसो मानिसलाई त पिनास नै पनि हुने गर्छ । चिसो मौसममा पिनासको जोखिम बढी हुन्छ । रुघा विग्रियो भने पनि पिनास हुन्छ । सामान्यतया, नामका किटानुको संक्रमण भयो भने पिनासको जोखिम हुन्छ । पिनासको पीडा पनि उत्तिकै चर्को हुन्छ ।
अझ पिनासको समयमा उपचार भएन भने त त्यसको असर आँखा र दिमागमा पनि पर्ने स्वाथ्यकर्मीहरु बताउँछन् । तर, कतिपय मानिसले पिनास विग्रिसक्दा पनि त्यसलाई रुघाकै रुपमा बुझ्ने गरेका हुन्छन । यतिबेलासम्म उपचार ढिलो भइसक्छ र अनावश्यक पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त पिनासका केही लक्षणहरु हुन्छन जसलाई ख्याल गर्न सकियो भने यसबाट जोगिन सकिन्छ । जस्तै, नाक बन्द हुने, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या पिनासको लक्षण हुन सक्छन् । कतिपयको नाकबाट पहेलो पानी निरन्तर बग्यो भने पनि त्यसलाई पिनासको लक्षणको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
पिनासलाई लामो समयसम्म रहन दियो भने त्यसले सबैभन्दा पहिले आँखामा असर गर्छ । किनकी, आँखा नाकको सबैभन्दा नजिक हुन्छ । अझ पनि यसमा खेलाची गरियो र उपचारमा ध्यान दिइएन भने यसको असर दिमागका पुग्छ र यसले निकै गम्भिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसरी दिमागमा पुगेको पिनासको कारण दिमाग नै पाक्ने पनि हुन सक्छ ।
कसरी जोगिने त पिनासबाट ?
पिनासको आशंका हुनसाथ त्यसको रोकथाममा लागि हाल्नुपर्छ । समयमै स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्ने हो भने पिनास चाँडै निको पार्न पनि सकिन्छ । तातोपानीको वाफ लिदाँ पनि पिनास कम हुन्छ । यदी पिनास धेरै नै जमेको छ भने इन्डोसाइकोसाइनेक्स सर्जरी गरेर नाकको प्वाल फराकिलो पारिन्छ र संक्रमणजन्य कुराहरु बाहिर निकालिन्छ ।
नाकको हड्डी बाङ्गो भएर पिनास भएको हो भने सर्जरी गरेर नाक नै सोझो बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिसको जन्मजात नै नाक बाङ्गो हुने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा परेर वा नाक ठोक्किदा पनि नाकको हड्डी बाङ्गीन सक्छ । यसरी नाकको हड्डी बाङ्गीदा पनि पिनास निम्तिने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अप्रेशन गरेर नै नाकको हड्डी सोझ्याउनु पर्छ ।
एउटै फिल्म खेलेको ६० करोड लिन्छन् यी अभिनेता, कस्को पारिश्रमिक कति !
मुम्बई – बलिउडका स्टार्सले कति पारिश्रमिक लिन्छन् भन्नेमा सबैका चासो नै हुन्छ । सबै कलाकारले फिल्म हिट भएसँगै कलाकारले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने गर्दछन् तर फिल्म फ्लप भयो भने पनि उनको फिल्म घट्दैन
के यी डरलाग्दा फिल्महरु एक्लै हेर्न सक्नुहुन्छ ?
एजेन्सी । विश्वमा बन्ने चलचित्रको तथ्याङ हेर्ने हो भने २० प्रतिशत चलचित्र हरर बनिरहेका छन् । हरर चलचित्र हेर्ने दर्शकको आफ्नै जमात छ । हरर चलचित्र हेरेर दर्शक डराउने अनि रमाउने गर्छन् ।
च्याम्पियन्स लिगबारे भित्री कुराहरु
युरोपको प्रतिष्ठित खेल च्याम्पियन्स लिगको फ्यानहरु विश्वभर रहेका छन् । युरोपका चर्चीत क्लबहरु यस लिगको उपाधि जित्नुलाई सबैभन्दा ठुलो सफलता मान्छन् । युइएफए च्याम्पियन्स लिग सन् १९५५ मा सुरु गरिएको
रक्सी पिउने बानी छ ? आजै छोड्नुस् नत्र मृत्युको मुखमा पुगिएला !
२०, ३० र ४० वर्षमा गर्भवती ? शरीरमा पर्नसक्छ यस्तो गम्भीर असर !
मोबाइलमा यस्ता फिल्महरु हेर्दै नहेर्नुहोस्
छड्के जाँचमा पुगेका गृहमन्त्रीसँग विमानस्थलका कर्मचारीले झुट बोलेपछि...
एसएसबीकाे कुटपिटबाट मृत्यु भएका नेपालीकाे परिवारलार्इ पहिलाे पटक क्षतिपूर्ति दिदैँ भारत सरकार
‘बिकिनी एयर होस्टेस’का कारण चर्चामा एयरलाइन्स
बेहुलीलाई दान गरेको सिन्दूर पोते फिर्ता
काठमाण्डौ । भारतीय प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएका रौतहट साविक सरमजवा गाविसका मुकुल राय यादवको परिवारलाई भारतीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।
घिसिङले गरे ३ वर्षभित्र १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने दाबी
बेसहरा बनेका बराम परिवारलाई नाम्जुङ सेवा समाजको आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । कतिपय खराब कुरालाई पनि हामीले जीवनको अंग बनाएका हुन्छौँ । जुन बानीले शरीरमा गम्भीर रोग नै निम्त्याउन सक्छ । शरीरलाई असर पार्ने त्यस्तै एउटा बानी हो, नियमित मदिरा सेवन ।
सुरुङ्गा, झापा । दुई साताअघि अग्निलाई साक्षी राख्दै बेहुलीको सिउँदो भर्दै सिन्दूरदान गरेका बेहुलाले दान गरेको सिन्दूर फिर्ता पाएका छन् ।
यी देशहरुमा हुन्छ बलात्कारीलाई यस्तो कडा सजाय
नागरिकताधारी रोबोट सोफियालार्इ नेपाल ल्याइँदै
यी हुन् बलात्कारीलाई क्रुर सजाय भएका देशहरु, कुन देशकाे सजाय कस्ताे